Faahfaahinta Mushaharka Waallida Ah Ee Real Madrid Ay Siinayso Kylian Mbappe - GOOL24.NET
Faahfaahinta Mushaharka Waallida Ah Ee Real Madrid Ay Siinayso Kylian Mbappe
Kylian Mbappe ayaa noqon doona ciyaartoyga ugu mushaharka badan kubadda cagta haddii uu u wareego kooxda reer Spain ee Real Madrid oo maanta la sheegay inuu heshiis hordhac ah la gaadhay, taas oo uu si bilaash ah ku tegi doono marka uu dhamaado qandaraaskiisa PSG oo ku eg bisha June ee sannadkan.
Sida uu qoray wargeyska Bild ee kasoo baxa waddanka Jarmalka, Mbappe iyo Real Madrid ayaa wada gaadhay heshiis uu kaga mid noqonayo kooxdaas, sidii aanu idiinku soo gudbinay wararkii maanta.
Mushaharka uu Mbappe ka qaadan doono Real Madrid ayaa la sheegay inuu yahay 50 milyan oo Euro oo u dhiganta 41.5 milyan oo Gini oo ay cashuurtu la socoto, waxaana uu sidaas ku noqonayaa ciyaartoyga adduunyada oo dhan ugu mushaharka badan marka laga eego dhinaca kubadda cagta.
Faahfaahinta mushaharka laacibkan ayaa layaab ku riday taageereyaasha kubadda cagta, iyadoo loo qaybiyey maalintii, saacaddii illaa laga gaadhsiiyey halkii ilbidhiqsi.
Faahfaahinta mushaharka Mbappe:
Sanndkii: €50 milyan oo Euro
Bishii: €4.2 milyan oo Euro
Toddobaadkii: €961,500 Euro.
Maalintii: €137,360 Euro
Saacaddii: €5,723 Euro
Daqiiqaddii: €95.40 Euro
Halkii ilbidhiqsi: €1.58 Euro.
Real Madrid ayaa dhawr jeer dalabyo ka gudbisay Kylian Mbappe xagaagii tegay, waxaanay diyaar u ahayd inay bixiso 200 milyan oo Euro, hase yeeshee PSG ayaa iska diidday, iyadoo ku adkaysatay in aanay iibinayn laacibkeedan.
Labada kooxood ayaa markaas kaddib isku jeediyey eedaymo la xidhiidha dalabkan. PSG ayaa sheegtay inay Los Blancos ixtiraam-darro muujisay, isla markaana daqiiqadihii ugu dambaysay ee uu xidhmayay suuqu ay soo dalbatay laacibkan, halka Florentino Perez uu tilmaamay inuu diyaar u ahaa inuu bixiyo lacagta si uu u helo laacibkan.